gore vs yekunze ssd / hdd kuchengetedza: ndeipi yaunofanira kusarudza zvichienderana nezvinodiwa
Kuru Nhau & Ongororo Cloud vs yekunze SSD / HDD kuchengetedza: Ndeipi yaunofanira kusarudza zvinoenderana nezvaunoda
Cloud vs yekunze SSD / HDD kuchengetedza: Ndeipi yaunofanira kusarudza zvinoenderana nezvaunoda
Cloud masevhisi ave chikamu cheupenyu hwese & apos; s hupenyu. Unogona kusazviziva, asi kunyangwe iwe ukavhura PowerPoint mharidzo iyo yakatumirwa kwauri kuburikidza neemail (kana Dropbox), iwe & apos; wakashandisa gore.
Zvakare, sezvaungave uchiziva, Google yaunza yayo yemahara isingagumi yekuchengetedza emhando yepamusoro mapikicha kune magumo . Izvi zvinotanga kushanda nhasi, Chikumi 1. Kunyange mafoto nemavhidhiyo hazvifanirwe kunge zviri izvo chete kana uchiita sarudzo yekuti enda kune gore kana hard drive chengetedzo, ivo zvirokwazvo chikamu chemufananidzo muhombe (pun inotarisirwa).
Zvakare zvakare, kune akawanda mamwe marudzi emafaira uye software iwe yaungangoda kuchengeta. Ipo gore richigona kuita yekunze SSD / HDD kuchengetedza kuita kunge kwapera, haisati yakwanisa kuitsiva zvachose. Ngatimboonai nei, uye sarudzai yakanakisa sarudzo yezvaunoda.
Enda kune Cloud kuchengetedza kana iwe uchida:
Izvo & apos; s yakapusa - gore rekuchengetera rakachengetwa 'mugore', kana mune mamwe mazwi kune ako akapihwa mupi & apos; s server. Unogona kuiwana chaiko kubva chero kupi zvako pasi, chero nguva, uye kubva pane zvakanakisa chero chazvino mudziyo une sisitimu inoshanda. Yako Android foni, yako iPhone, piritsi, PC, Mac - unozvitumidza. Uku ndiko kurerukirwa uko & apos; isingatariswe.
Kune rimwe divi, SSD / HDD yekuchengetedza iri yemuviri. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti uende nayo kuitira kuti ushandise mafaera iwe & apos; akachengetwa ipapo. Nhau huru ndeyekuti zvishandiso zvemazuva ano zveSSD zvinotakurika, saka hatidi kuti kuzvitakura kunonetsa.
Kubatana kwakakura kune vamwe vanhu, uye kugona kungo tumira chinongedzo kushamwari yako kana waunoshanda naye, uyo anogona kurodha pasi mafaera nekudzvanya, akakosha. Ndipo & apos; s apo kuchengetedza kwemuviri kunotanga kunzwa sechinhu chekare. Kune akati wandei ekubatana maturusi. Tarisa uone 'Pro workflow' chikamu pazasi.
Zvino, kusimba iri zvakare chikamu chinofambiswa nemityairi yepanyama & apos; haichengete, nekuti ... ivo vanowanzo kukuvara. Iwe unongoziva zvazvinoreva kurasikirwa chakakosha huwandu hwemafaira akakosha, kana zvikazoitika kwauri. Ndokusaka vanhu vachiwanzochengeta data rakakosha pane ese ari maviri mafambisi epanyama, uye nemasevhisi masevhisi - nenzira iyi pane & apos; s chirongwa 'B'.
Ehe, gore rekuchengetedza rinogara riri munjodzi yekurwiswa necyber, asi (bata huni), izvi hazviwanzo. Uyezve, zvinangwa zvekurwiswa kwakadai kazhinji makambani makuru, uye kwete avhareji mutengi. Mune mamwe mazwi - hatidi kunetseka nazvo.
Funga nezvemuviri SSD / HDD kana iwe uchikoshesa:
Kubva chaipo pabhat, kuwana data rakachengetwa pane yekuchengetera yemuno kunogara kuchikurumidza pane kurodha pasi uye kurodha pasi kubva uye kubva mugore. Iyo & apos; kwete rocket sainzi. Ipo gore rekuchengetera riine kupenya kwekugovana mafaera nevanhu vanobva pasirese, haimiriri mukana kana zvasvika pakukurumidza uye kugona kweicho chaicho kuverenga nekunyora kumhanya. Ziva kuti SSD ichagara ichikurumidza kupfuura HDD.
Pasina kuwana hunyanzvi, zvinorevei kwauri ndezvekuti kunyatso kushanda nemafaira uye kuashandisa nenzira chero ipi zvinoitwa nekukasira kana akachengetwa imomo paPC yako (ingave iwo maapos ari pane yako yakavakirwa-mukati SSD kana yekunze imwe). Izvi zvinotiendesa kune inotevera poindi ...
Yehunyanzvi kufambiswa kwebasa
Humwe hunyanzvi hunoda kumwe kufashukira kwemabasa, uye gore rekuchengetera harisi sarudzo yevanhu vanoshanda nema & apos; ari kuda mafaira zvakanyanya. Ehe, isu tinoreva ivo programmers, vhidhiyo edhizaina, maenjineri maenjineri, vagadziri vemimhanzi, kana kazhinji chero munhu anoda kushanda nemafaira mahombe anoda kuverenga nekukurumidza uye kunyora kumhanya.
Kugadziridza vhidhiyo yakanangana negore kwave kugoneswa nekuda kwekubatana senge iri pakati Dropbox & Clipchamp . Nekudaro, nehunyanzvi - iwe haugone chete kushandisa ako gore-akachengetwa mafaera, asi iwe unogona kugadzirisa zvakananga pasoftware yakachengetwa pagore. Kunyangwe izvi zvichishamisa (uye zvichinyatso kuvimbisa ramangwana), zvinokodzera chete kushandiswa kwechiedza.
Kunyangwe ichikwanisa zvakakwana kushandira mumwe munhu anoda kupedzisa chirongwa chechikoro kana bhizinesi risingade basa, hazvisi izvo zvinoenderana nehunyanzvi software senge Final Cut, kana Adobe Premiere.
Kune mhinduro dzemambure senge SNS , izvo zvinogona kuita kuti zvive nyore kwauri kuti ugadzirise pamwe chete nemumwe munhu (kunyangwe kana vari kure), asi izvi zvinoitwa nenzira yechinyakare yekuteedzera maraibhurari, uye nekugovana mafaera. Nomad (SNS 'chikuva) inoita chete kuti maitiro aya aite otomatiki, uye zvive nyore, asi hazviite kuti iwe ugamuchire yako vhidhiyo yekugadzirisa software mugore. Tichiri kure neichi chokwadi.
Ichi chakati omei kutonga, nekutigore rekuchengetedzainowanzo kutengeswa sevhisi yekunyorera - seyako Amazon Prime kana Netflix account. Vamwe vanopa gore rekuchengetera vanopa 'hupenyu hwese' kunyoreswa, zvichireva kuti iwe unosvika pakutenga iyo yekuchengetedza (duh!). Kazhinji & apos; inodhura kwazvo kuenda kune ye'upenyu hwese 'kunyorera, nekuti iwe waizobhadhara iwo iwo mutengo mumwe chete munzvimbo yemakore 2-3 makore, kana iwe uchizonyorera. Nekudaro, kazhinji iwo 'ehupenyu hwese' mitengo yakakwira kupfuura iwo akaenzana saizi yekuchengetedza yeiyo chaiyo hard drive.
Semuenzaniso, panguva ino, Samsung & apos; inozivikanwa 500GB T5SSDinoenda ne $ 89 paAmazon.com, nepo iyo saizi yegore yekuchengetera inoita pakati pe $ 150-200. Ipo, kuribhadharira mwedzi wega wega kunogona kuderera kunge $ 3-4 pamwedzi, usakanganwe zvatakataura pamusoro apa - iyo 'yehupenyu' yekutenga inokuchengetedza mari munguva refu, uye it & apos; sa mari yakanaka, kana unoronga kushandisa gore kuchengetedza mune ramangwana.
SAMSUNG T5 Inotakurika SSD 500GB
Tora varaidzo yako, kosi, kana mitambo chero kupi, pane chero chinhu. Inzwa rusununguko rwekuchengetedza kukuru uye nekukurumidza kuchinjisa kumalaptop, mafoni, mutambo wekunyaradza uye zvimwe.
Pane rimwe divi, Kubvumirana inopa mamwe madhiri makuru nerupogore rekuchengetedzamasimba nemitengo yakaderera sezve izvozvi. Semuenzaniso, unogona kubhadhara $ 5 pamushandisi, pamwedzi (inobhadharwa pagore) ye1TB yekuchengetedza, $ 8 ye4TB, uye $ 15 ye10TB. Sync ndeyekubatana-yakatarisana gore rebasa. Inokupa iwe kugona kugovana mafaera uye maforodha; negadziriro yeparutivi mafaera munguva chaiyo, uye iwo magumo-kusvika-kumagumo akanyorwa, zvinoreva kuti iwe chete unokwanisa kuwana mafaera. Iko kune toni yekumwe kugadzirwa uye bvuma maturusi uye maficha, ayo aunogona kutarisa paSync.com.
Mutongo: Ndeupi wako
Izvo & apos; zvese zvinoenda zvinoenderana nezvinhu zvishoma senge:
Chii chaunoda kuchengetwa kwe:
A) yako pachako / yekushandisa zvisina kujairika
B) bhizinesi / pro kushandisa
Mudziyo mukuru iwe & apos; watichazoshandisa iyo kuchengetedza ne:
A) smartphone / piritsi
A) inowanzo kurasikirwa / kuisa zvisirizvo zvigadzirwa zvako
Kana iyo'KU'chikamu chinotsanangura iwe zvakanakisa, ipapo iwe & apos; zvimwe ungangoita mushandisi, anotarisa kutsvaga nzvimbo yemhuri yavo mafoto / mavhidhiyo; uri mudzidzi; unoita bhizinesi rinoda zvakawanda, asi risinganyanyo kunetsa admin basa; unogadzira uye unoda kugadzirisa ako mafoto (uye une akawanda acho), mavhidhiyo, kana kunyangwe podcast pane nhunzi.
Ndiyo & apos; s kana iwe uchida gore-based chengetedzo. Kana zvako zvaunoda usinga pfuure 2-10GB yekuchengetera, kune mashoma emahara emasevhisi masevhisi ayo anokushandira iwe mushe. Semuyenzaniso, iCloud inopa vashandisi 5GB kana chengetedzo yemahara, nepo Amazon Prime ichiita kuti iwe ugoisa huwandu husingaverengeke hwemifananidzo / mavhidhiyo paAmazon Photos (chete mapikicha uye mavhidhiyo zvakadaro!
Nekudaro, kana iwe ukawira mune iyo'B'bracket, ipapo iwe & apos; zvimwe inyanzvi inoda kushanda nemavhidhiyo makuru, odhiyo, kana mamwe mafaera enhau. Sezvambotaurwa, vanhu ava vanoda kukurumidza kuchengetedza, izvo zvinogona kuvabatsira kuti zvinhu zviitwe. Cloud yekuchengetera yakanaka kana iwe uchida kugovana mafaera, uye kunyangwe vhidhiyo yekugadzirisa maraibhurari, asi haina kukunda & apos; haikuregedze iwe kuti ugadzirise zvakananga pane iro gore.
Kana iwe uri mu'C'chikamu, iwe & apos; zvimwe ungangogadzira, kana ... wakanyonganiswa (kana zvese zviri zviviri)! Ita shuwa kuti unochengeta mafaera ako, zvisinei kuti ndeipi sarudzo yaunosarudza. Muchokwadi, iri izano rakanaka kune wese munhu. Usakanganwe kuti iwe unogona kugara uchiwana AirTag , Smart Tag , kana Tile tracker yako SSD / HDD, saka haungavhunduke pese paunoisa zvisizvo.
Chii chimwe chiri kunze uko
Makadhi e Micro SDdzichiripo! Muchokwadi, zvakachipa kupfuura nakare kose. Zvinotendwa izvozvo Apple iri kudzosa iyo Micro SD kadhi slot neinotevera iteration yeMacBook Pro. Izvi zvechokwadi zvichave nemhedzisiro, uye zvichabatsira kudzosa Micro SD makadhi kumashure mune fashoni. Vachazviita kune iyo iPad / iPhone? Zvichida. Nekudaro, isu tanga tisina kutarisira & apos; hatitarisiri kuvaona paMacBook nyowani, saka ... ndiani anoziva!
Flash inotyairainodhura uye inotakurika. Ehe, kumhanyisa hakutore & maapos; usave SSD-senge, asi iwo akanaka ekuchengeta mafaera kungoitira kuachengeta. Iwe pamwe hausi kuzowana & apos; t kunge uchiita chero 'pro' yekugadzirisa basa pane flash drive.
Rangarira kuti kumhanya kwekuverenga / kunyora kwechigadzirwa chako kwakakoshawo! Kunyangwe iyo inokurumidza SSD haikwanise & apos; inoita kune yayo nhanho kugona, kana iyo & apos; yakakwenenzverwa muchiteshi chisiri & apos; isingakwanise kuenderana nekuverenga / kunyora kumhanya.
droid turbo 2 foni nhandare
Iyo nyowani Samsung Galaxy J3 inotengesa kuVerizon kwe $ 170 chaiko